Momba anay - Shenzhen Saita Co., Ltd.
SYGAV dia orinasa teknolojia vaovao sy avo lenta manokana amin'ny famokarana fiara Multi-media Player miaraka amin'ny GPS Navigation System sy vokatra Audio & Video fiara hafa. Amin'ny maha-mpamatsy rafi-pitantanana fiara matihanina matihanina azy, SYGAV dia manana ekipa tena tsara izay mifantoka amin'ny fampivoarana ny vokatra sy ny famolavolana, ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fisafoana ary ny fiasan'ny orinasa. Noho ny vokatra avo lenta sy ny serivisy tonga lafatra, SYGAV dia lasa mpamatsy lehibe amin'ity indostria ity izay mahazo mpanjifa bebe kokoa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Miandrandra amim-pahatsorana ny fametrahana fifandraisana maharitra sy stratejika miaraka aminao izahay mifototra amin'ny raikipohy momba ny "tombontsoa iombonana sy raharaham-barotra mandresy". SYGAV, mpanamboatra sy mpaninjara voalohany amin'ny lohan'ny Android aftermarket, dia te hampahatsiahy ny mety ho mpanjifa ny zavatra ilainao hotadiavina rehefa miantsena ny iray amin'ireo entana ireo. Tsy mahagaga raha ny fanavaozana ny fiaranao dia hanome anao fampiasana sy fahafinaretana an-taonany maro. Ny iray amin'ireo lehibe indrindra ho an'ny fahafinaretana madio dia ny lohan-doha na stereo. Na dia tonga miaraka amin'ireo entana ireo aza ny fiara vaovao, dia mety tsy manana ny endri-javatra rehetra tianao izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, maro ny olona manana finday Android te-hanararaotra ny endri-javatra vaovao Android Auto, izay mamela ny endri-javatra finday malaza indrindra mba hamirapiratra eo amin'ny dash ny fiara, toy ny filalaovana mozika avy amin'ny findainao, GPS navigation, ary ny fanaovana. miantso tsy misy tanana.
Alohan'ny handraisanao ny stereo head unit vaovao dia tadidio ireto antony ireto:
Ohatrinona ny efitrano ao amin'ny dashboard anao?
Ny fiara samy hafa dia samy manana ny fametrahana ny dashboard azy ireo. Izany dia mety hanasarotra kokoa ny fisafidianana ny singa loha tsara. Ny fiara sasany dia manana ilay antsoina hoe stereo DIN double, izay midika fa misy slot stereo roa mifanaingina. Ny fiara hafa dia manana stereo DIN tokana, izay tsy dia misy toerana firy. Zava-dehibe ny mahafantatra izay ananan'ny fiaranao alohan'ny hanombohanao miantsena.
Betsaka ny trano fametrahana feo no hametraka izay rehetra vidianao eo amin'ny toerany. Na izany aza, raha mividy head unit na stereo amin'ny Internet ianao dia mila manamarina raha hametraka izany ho anao ny fivarotanao. Azonao atao ny mametraka azy samirery fa tadidio fa sarotra ny fitaovana elektronika amin'ny fiara vaovao ary afaka miditra amin'ny lohanao ianao.
Olan'ny rafitra fiara:
Rehefa manala ny stereo ianao, dia mety hisy fiantraikany amin'ny rafitra tena ilaina hafa, toy ny fanaraha-maso ny toetr'andro, ny harona rivotra, ary ny fanairana fiara. Tokony ho fantatrao ny fitondran-tenan'ny fiaranao rehefa esorinao ny stereo OEM.
Jereo sy tsapao
Raha manana fiara tranainy ianao dia azonao atao ny mitazona ny endriky ny OEM amin'ny dashboard anao. Amin'izay tranga izay, mety ho marani-tsaina ny fanaovana fametrahana manokana na ny fampandehanana ny findainao Android manokana; Ny lohan'ny fiara avy amin'ny Android dia afaka maka toerana be. Tsy mifanaraka tsara amin'ny endrik'ilay fiara efa tranainy koa izy ireo. Amin'ny toe-javatra hafa, tokony hojerenao fa ny loko sy ny endriky ny loha-doha dia mifanaraka amin'ny endriky ny ati-tranonao.
Raha handany ny vola amin'ny stereo na head unit vaovao ianao dia te-hanana iray izay manana interface tsara ho an'ny mpampiasa. Tokony hahazo unit tianao ianao izay zara raha kitihina vao afaka miasa.
Ankehitriny rehefa mahafantatra bebe kokoa momba ny lohan-doha sy stereos aorian'ny varotra ianao, dia tokony ho afaka mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fividianana ianao.